Zandary miisa 12 nanaraka fiofanana tao amin’ny Sekoly ambony ny zandarimaria ao Moramanga no voamarina fa voan’ny Covid-19 taorian’ny fitiliana natao azy ireo ny 15 jolay 2020. Efa sitrana avokoa izy ireo ankehitriny, ary nahazo taratasy fanamarinana izany tsirairay avy. Mbola tazomina ao amin’ny sekoly mandritra ny 14 andro anefa izy ireo, mialoha ny hiverenan’izy ireo isanisany any amin’ny toerana iasany avy.
Saron’ny Zandary avy ao amin’ny brigady Isoanala Distrika Betroka, omaly, ny tovolahy iray monina ao Maromandroso Kaominina Isoanala, nahitana rongony tapa-gony milanja 3,5 kg. Anatin’ny famotorana azy ny Zandary hamantarana ny fiavian’io zavamahadomelina io sy izay mety ho iray tsikombakomba aminy.
Tonga taty Nosy Be ny filoha Andry Rajoelina mivady androany nametraka paikady hifehezana avy hatrany ny mety ho fiparitahan'ny valan'aretina Covid-19. Nisy ny fanolorana fitaovana fanaovana fitiliana sy ireo fanafody hitsaboana ireo marary ao amin’ny Hopitaly be. Nahazo concentrateurs d'oxygène roa ny hopitaly hanampiana ireo efa misy ao hamonjena ireo marary misy fahasemporana. Nambara ihany koa fa hovatsiana fiara mpitondra marary ary « radiologie numérique » ny hopitaly. (Jereo Sary Tohiny)
Misokatra manomboka androany 25 jolay 2020 etsy amin’ny « stade annexe » Lapan’ny Fanatajahantena sy ny Kolontsaina Mahamasina ny Centre de Traitement Covid -19 vaovao. Afaka mandray marary eo amin’ny 250 ity toeram-pitsaboana ity, ary efa misy ny fampitaovana rehetra toy ny « respirateurs » sy ny « concentrateurs d’oxygène ». Natao handraisana an-tanana ireo marary manana soritr'aretina “formes graves” tahaka ny olana eo amin’ny taovam-pisefoana sy ireo marary ahitana soritr’aretina nefa tsy afaka mihiboka ao an-tranony ity Centre de Traitement Covid- Mahamasina ity.